NEW YORK(P-TIMES) – Golaha Ammaanka ee Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa ayaa maanta kulan gaar ah ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaana waxay ka hadlayaan ammaanka, Doorashooyinka iyo marxaladihii u dambeeyey.
Golaha ayaa warbixin ka dhageysan doonaa Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo dhawaan la magacaabay lana fal-galay arrimo adag oo xagga siyaasadda ah, gaar ahaana dhinacyada dawlad gobaleedyada iyo dawladda Soomaaliya.
Ergayga gaarka ah waxaa aad loo sugayaa warbixinta uu ka jeedin doono kulanka maanta waxaana qodobada isha lagu hayo kamid ah waxyaabaha uu ka oran doono khilaafka u dhaxeeya dawladda Faderaalka iyo Maamul gobaleedyada dalka, waxaana qodobada ugu adag ka mid ah arrimaha siyaasadda.
Doorashooyinka Jubbaland oo ay aad ugu muransan yihiin dhinacyada Siyaasadda ayaa isha lagu hayaa wuxuu ka dhihi doono Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay, waxaana sidaas oo kale lafilayaa sida uga hadlo arrimaha doorashooyinka 2021-ka ee Soomaaliya.
Ergaygii hore ee Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa ayaa si adag u dhaliilay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxayna qodobadaas kamid ahaa doorashadii Baydhabo, ammaanka, doorashooyinka dalka oo dhan iyo hanaanka wada hadalka oo wali halkiisii jooga.